Xumbaynayso - Henan Dhuxul Research Keming Farsamada Co., Ltd.
codsiga ka xumbaynaya
la taaban karo xumbo, sidoo kale loo yaqaan aircrete, la taaban karo ka xumbaynaysa, foamcrete, la taaban karo miisaanka yar gacanta ama hoos u taaban karo cufnaanta, waxaa lagu qeexaa sida slurry cement ku salaysan, iyadoo ugu yaraan 20% (boqolkiiba mugga) xumbo entrained galay malaastiisa oo caag ah.  Sida inta badan ma wadar ahaan labada lug dhab ahayn waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka ee xumbo la taaban karo erayga saxda ah waxaa loogu yeedhi lahaa hoobiye halkii la taaban karo; waxaa loo yeedhi karaa "cement ka xumbaynaysa" iyo sidoo kale. cufnaanta ee xumbo la taaban karo sida caadiga ah way ku kala duwan 400 kg / m³ in 1600 kg / m³. cufnaanta waxaa sida caadiga ah ay gacanta ku badalaa si buuxda ama qayb ka mid ah wadar ahaan labada lug ku wanaagsan xumbo.
la taaban karo ka xumbaynaysa caadi ahaan ka kooban yihiin slurry ka mid ah sibidhka iyo duuli ash ama ciid iyo biyo, inkastoo ganacsatada qaarkood ku talinaynaa cement saafi ah oo biyo ah la yeeshay wakiilka ka xumbaynaya for keegag aad u fudud. slurry Tani waa sii qaso xumbo a dardaro aerated ee warshad la taaban karo qodan. xumbo waxaa abuuray oo isticmaalaya wakiil ka xumbaynaya, qaso biyo iyo hawo ka matoor. Wakiilka xumbaynayso waa in ay awoodaan in ay soo saaraan goobooyin hawo la heer sare ah xasilloonida, adkaysi u ah geedi socodka jirka iyo kiimikada ee la isku qasin, gelinayn iyo adkaansho isticmaalo.
Xumbaynaysa isku dar ah la taaban karo in lagu shubo karaa ama loogu shubaa wasakhahaasi, ama si toos ah xubno ka dhismaha. xumbo The awood slurry si xora u socdaan ay sabab u tahay habdhaqanka thixotropic of goobooyin xumbada, ogolaanin in ay si fudud u noqon shubtay galay foomka doortay ama wax viscous mould.The u baahan yahay ilaa 24 saacadood si ay u xoojiyaan (ama yar sida laba saacadood haddii uumi daaweyn leh heerkulka ilaa 70 ° C si ay u dardar-socodka ah.), taas oo ku xidhan oo ay ku jiraan doorsoomayaal heerkulka iyo huurka. Marka bedesheen, midhaha sameeyay lagu sii dayn karaa ka caaryada.
La taaban karo ka xumbaynaysa laga been abuurtay la degsiimooyin qalalan of 400 in 1600 kg / m³, iyadoo 7-maalin xoojinka qiyaastii 1 ilaa 10 N / mm² siday u kala horreeyaan. Xumbo la taaban karo waa dab u adkaysta, iyo hantida ningax kaamerada iyo acoustical dhigo mid fiican ee tiro balaadhan oo ah ujeedooyin, ka qalabada dhulka iyo saqafyada, si ay u tirtiri buuxintii. Waxa kale oo ay si gaar ah faa'iido u soo celinta qoday.
A yar oo ka mid ah codsiyada of xumbo la taaban karo waa:
precast xubno derbiga / darfaha
tuuray-in-situ / kabka-in-meel derbiyada
qalabada magdhow saareen
dabaqa ningax screeds
screeds saqafka ningax
godan qayb buuxinta
sub-salka ku laayeen waddooyinkii waaweynaa
buuxinta of blocks godkii
loox ningax prefabricated
Xumbo la taaban karo waa wax wejiyo dhismaha la hab fudud wax soo saarka waa qaali marka la barbar dhigo autoclave la taaban karo aerated. Xumbo xeryahooda la taaban karo isticmaalka ash dhoobnayd in isku darka slurry waa ka raqiisan weli, oo ay saameyn deegaanka ka yar. Xumbo la taaban karo oo la soo saaray in noocyo kala duwan oo degsiimooyin ka 200 kg / m³ 1,600 kg / m³ ku xiran codsiga. waxyaabaha cufnaanta fududee in laga gooyaa karaa tirada kala duwan. Iyadoo sheyga waxaa loo arkaa nooc ka mid ah la taaban karo (la goobooyin hawo wadar bedelay), tayada ay kaamerada iyo acoustical qalabada sare waxaa codsi ah oo aad u kala duwan ka badan la taaban karo caadiga ah sameeyaan.
isbeddellada iyo horumarinta Recent
Ilaa toban sano ka hor, xumbo la taaban karo ayaa loo arkaa mid daciif ah oo aan waarta oo leh sifooyin yaraanshaha sare. Tan waxa u sabab ah goobooyinka xumbo deganayn keentay in xumbo la taaban karo isagoo guryaha ku haboonayn soo saarka leh cufnaanta aad u yar (ka yar 300 kg / m³ cufnaanta qalalan) iyo sidoo kale load sita codsiyada dhismaha. Sidaa darteed waa muhiim si loo hubiyo in hawada entrained galay la taaban karo ee ka xumbaynaysa ku jira deggan waqti isku mid ah goobooyinka labis aad u yar in ay ku sii dhawrsan iyo go'doon, hana sidaas kordhin permeability ee koollada cement inta u dhaxaysa hulal ah.
Horumarinta ee dardaro-enzyme wakiilada afkuu ku saleysan, xasilooni xumbo u qaadidda admixtures dhalin xumbo khaas ah, la isku qasin oo ku listo qalabka soo hagaagtay xasiloonida ee xumbada oo halkan xumbo la taaban karo, taas oo suurto gal ah in soosaarka sida nuurka oo sida 75 kg / m³ density.The enzyme ka kooban borotiinka aadka u firfircoon ka soo jeedo biotechnological iyo waxa aan ku salaysan borotiinka qurux badnayn hydrolysis.In sannadihii la soo dhaafay ka xumbaynaysa la taaban karo ayaa la isticmaalay si ballaadhan ku laayeen waddooyinkii waaweynaa, dhismayaasha ganacsiga, dhismayaasha dhaqancelinta musiibo, dugsiyada, guryaha iyo horumarinta guryaha ah dalalka sida Germany, USA, Brazil, Singapore, India, Malaysia, Kuwait, Nigeria, Botswana, Mexico, Indonesia, Libya, Sacuudi Carabiya, Algeria, Ciraaq iyo Masar.